Ndege yevafambi inopunzika nekupisa muTexas, vanhu makumi maviri nevaviri vanopona
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Ndege yevafambi inopunzika nekupisa muTexas, vanhu makumi maviri nevaviri vanopona
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Ndege yevafambi inopunzika nekupisa muTexas, vanhu makumi maviri nevaviri vanopona.
Sekureva kwasheriff wemuno Troy Guidry, vese 21 vafambi nevashandi vaive vabuda zvakachengeteka, kunyangwe munhu mumwe chete akange arapwa muchipatara nekukuvara musana.
Tsaona iyi yakaitika muWaller County, padyo neguta reKaty, uye padyo neHouston Executive Airport.
Kunyangwe paine kukuvara kukuru kwemoto kunhandare, hapana akakuvadzwa akaudzwa, kungave pasi kana pakati pevatakurwi.
Ndege yevafambi, MD-80, yaisimuka nenguva dza10am nguva yemuno, yakananga kuBoston, Massachusetts.
Ndege yevatyairi yakadonha ndokupiswa muWaller County, padyo neguta reKaty, Texas uye padyo ne Houston Executive Airport nhasi, sekureva kweDhipatimendi reTexas rePublic Safety.
Ndege yevafambi, uye MD-80, yakaburuka ndokuputika mumarimi, zvinoenderana nemifananidzo inoshamisa kubva panzvimbo.
Zvinoshamisa kuti vese vanhu makumi maviri nevaviri vaive muchikepe vakakwanisa kutiza nendege, vakuru veko vakati.
Mifananidzo kubva panzvimbo ino inoratidza makore mahombe ekupfungaira utsi hutema apo vanodzima moto vaiyedza kudzimura mwoto unopfuta.
Nzvimbo yekuparadza yaive padyo nekona yeMorton neCardiff Roads. Kunyangwe paine kukuvara kukuru kwemoto kunhandare, hapana akakuvadzwa akaudzwa, kungave pasi kana pakati pevatakurwi.
Tsaona iyi inonzi yakaitika apo ndege, iyo MD-80, yakanga ichisimuka nenguva dzekuma 10am nguva yemuno, yakananga kuBoston. Yakananga kuchamhembe, zvinoita kunge yakatadza kusvika pakakwirira kumagumo enzira uye ndokuyambuka mugwagwa pachinzvimbo, pakupedzisira ichimira nekubata moto.